admin juillet 3, 2019 juillet 3, 2019 Aucun commentaire sur TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF
Hataoko maro indrindra ny taranakao, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamaroany. Aia sy Ana izany Ana izany ilay nahita ny ranomafana tany an-efitra, raha niandry ny borikin’i Zibona rainy izy. Jehovah Tompo ô, ahoana no hahafantarako fa handova ity aho? Ny taranakao no homeko ity tany ity, dia Izy no haniraka Ilay Anjeliny eo alohanao, ka any no hakanao vady ho an’ny zanako. Atopazy ny masonao, ka hatramin’ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miankandrefana; 15 fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Aoka anie mba tsy ho tezitra Hianao, Tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho: Tsy mba handringana Aho noho ny folo.
Hitako ny tarehin’ny rainareo, fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha; fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba ahy. Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako. Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko? Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho malagasyy amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izay holazaiko aminao. Ce document au format PDF 1. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany.
Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho. Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy baiholy taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.
Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho. Miaingà, miala amin’ity tanàna ity; fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity.
Ity no niseho voalohany. Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Bilana sy Zavana ary Akana.
Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Tso-drano iray ihany va no anao, ry ikaky? Mba ampisotroy rano kely aho. Izany no nanaovany ny anarany hoe Galeda. Hiverina aminao tokoa Aho raha avy ny taona toy izao; ary, indro hanana zazalahy Saraha vadinao. Araka izany teny izany no lazaonareo amin’i Esao, raha hitanareo izy.
Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Chapitre 31 1 [Ny nandosiran’i Jakoba avy tany Mesopotamia hody any Kanana] Ary Jakoba nandre ny tenin’ny zanakalahin’i Labana nanao hoe: Misia fahazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. Mianiana ary amiko aloha.
Fa tsy fantatr’i Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy. Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy.
Ary izy no nalaza indrindra jalagasy rehetra tao an-tranon’ny rainy. Inona izao nataonao taminay izao? Hafeniko amin’i Abrahama va izay hataoko?
Eny ary, fantatro ihany fa tamin’ny fahatsoran’ny fonao no nanaovanao izany; ary Izaho kosa dia niaro anao mba tsy hanota psf koa izany no tsy namelako anao hanendry azy. Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho: Hanome fampitanana va ianao mandra-pampanatitrao azy? Ireo no loham-pirenena tamin’ny Horita, dia ny loham-pireneny tany amin’ny tany Seïra.
Aza dia mamono ny ainy isika.
Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am-pofoako izy, mba hahazoako zaza aminy. Izao kosa no heviny. Amin’ny fotoan’andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy. Ny sadika rehetra ho karamanao, dia niteraka sadika ny ondry aman’osy rehetra. Efa nahita rano izahay. Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao?
Maroa anaka sy mihabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin’ny ranomasina; ary aoka ny vorona hihamaro eny ambonin’ny tany.